Shower – Nay Chi & Lamin Myanmar Real Estate
Hotel for sale, Bago. Lakhs 9,000.00
Hotel for sale, Bago.
ပဲခူးမြို့ရှိဟိုတယ်ရောင်းမည်။ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရှိပြီး လက်ရှိလုပ်ငန်းလည်ပတ်လျှက်ရှိသော ဟိုတယ်။ 9600 စတုရန်းပေ။ ဂရန်အမည်ပေါက်ဖြစ်ပါသည်။3ထပ် RC ဖြစ်ပြီး အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး ဟိုတယ်အခန်း 22 ခန်:ပါရှိပါသည်။ 9000 သိန်း။ ဆက်သွယ်ရန်။ Nay chi & La min Real Estate Ph: 09 793158939, 09 795727121 Viber: 09 443139801 www.myanmar-realestate.com
9600 sq ft 24 beds 24 baths
10 Floor, PYAY GARDEN, Yangon, Myanmar Lakhs 1,850.00
10 Floor, PYAY GARDEN, Yangon, Myanmar
Very good location. This isaspacious3bedroom property with Shwedagon Pagoda view, it comes with top amenities including Swimming Pool, Gym, Lift, Generator, C
Yadanar Hninsi housing, Lakhs 5.50
Yadanar Hninsi housing,
Bagayar tower,Sanchaung Lakhs 1,280.00
စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ဗားဂရာလမ်းမကြီးပေါ်၊ ဗားဂရာတာဝါ။ Lift ပါသောတိုက်ခန်းရောင်းမည်။ 1350 sqft, 11 Floor 1MBR, 1 B, Lift, Car Parking ပါကေးခင်း၊ ပြင်ဆင်ပြီး 1280 သိန်း (ညှိနှိုင်း) ဘဏ်ချိတ်ရပါသည်။ Nay chi & La min Real Estate Ph: 09 793158939, 09 795727121 Viber: 09 443139801
1350 sq ft2beds 1 bath
Ayeyar Chanthar Condo Lakhs 1,650.00
Ayeyar Chanthar Condo
Hlaing, Yangon Lakhs 1,850.00
၈မိုင်လမ်းဆုံအနီး ရန်ကုန် Lakhs 16,500.00
Very good location. Reasonable price. Near by market, citymart, shopping centers, bus stations. Quiet area.